Amavithamini we-CardioActive Enhliziyo > Ukwelashwa nokuvimbela
Amavithamini we-CardioActive ngenhliziyo: imiyalo yokusetshenziswa nokubuyekezwa
Igama lesi Latin: KardioAktiv Amavithamini enhliziyo
Isithako esisebenzayo: i-coenzyme Q10 (Coenzime Q10) + amavithamini B6, B9, B12 (Vitamin B6, B9, B12)
Umkhiqizi: I-Evalar (Russia)
Ukuvuselelwa kwencazelo nesithombe: 10.24.2018
Amanani kumakhemisi: kusuka kuma-ruble angama-363.
Amavithamini we-CardioActive enhliziyo - isengezo sokudla (isengezo sokudla) ekudleni, sisetshenziswa njengomthombo owengeziwe we-coenzyme Q10, i-folic acid, amavithamini B6 kanye B12ukudlala indima ebalulekile ekugcineni impilo yenhliziyo. Indlela esetshenziswe ngokwesayensi yomuthi inciphisa inqubo yokuguga, isiza ukuqinisa inhliziyo nemithambo yegazi.
AmaVithamini e-CardioActive enhliziyo akhiqizwa ngohlobo lwamaphilisi we-gelatin anesisindo esingu-0,25 g (ama-pcs ayi-15. Ngozimele, ebhokisini lekhadibhodi 2 amanxeba).
I-1 capsule iqukethe:
izithako ezisebenzayo: coenzyme Q10 ≥ 60 mg, uvithamini B6 (i-pyridoxine hydrochloride) ≥ 2 mg, uvithamini B9 (folic acid) ≥ 0,2 mg, uvithamini B12 (cyanocobalamin) ≥ 0.001 mg,
ababekhona: i-microcrystalline cellulose (inkampani ethwala), isitashi selayisi (othwala),
ICoenzyme Q10 ivuselela ukukhiqizwa kwamandla adingekayo emsebenzini wenhliziyo. Isiza ukulondolozela ubusha bomzimba ngokubuyisela ukuphefumula kwamaselula, iqinisa inhliziyo nemithambo yegazi, yandisa isikhathi sokuphila okusebenzayo.
I-Folic acid ibamba iqhaza enqubweni yokwenziwa kwegazi, isekele impilo yenhliziyo nemithambo yegazi, ikhuthaze ukwakheka okujwayelekile kwamangqamuzana abomvu egazi, isekele i-metabolism ejwayelekile yama-amino acid, futhi inomphumela omuhle kumetabolism yamavithamini amaningi ne-cholesterol.
Vitamin B6 ubamba iqhaza ekushintshisaneni kwe-cholesterol, amaprotheni namafutha, ukumuncwa kwama-amino acid nama-acids abalulekile wamafutha. Ikhuthaza ukwakheka okujwayelekile kwamangqamuzana abomvu egazi, ibamba iqhaza ekwakhekeni kwe-hemoglobin, kanye nasekulawulweni kwe-metabolism yamafutha esibindini. Ukuhlanganiswa kukaVitamin B6 kanye B12 kuvimbela ukuphazamiseka kwemithambo yegazi.
Vitamin B12 ezihilelekile metabolism of amino acid. Kuvimbela ukusilela kokungafani kanye ne-folic acid yokuntuleka.
Isenzo se-pharmacological somuthi, i-pharmacokinetics
Izakhi zomuthi zithuthukisa ukusebenza kwenhliziyo nokuhamba kwegazi emithanjeni. Ukukhishwa kwe-Hawthorn kanye namavithamini we-B kungaqinisa izindonga ze-myocardium, kufane nokushaya kwenhliziyo. Isidakamizwa se-Cardioactive singabekwa yi-cardiologists njenge-prophylaxis ye-myocardial infarction kanye nokwelashwa kokulungisa ngemuva kwayo.
Izinkomba eziphambili zokusebenzisa i-CardioActive
Yize i-Cardioactive iyisengezo sokudla, imvamisa isetshenziswa ku-cardiology. Njengoba ubufakazi obukhulu busho:
Ukujwayeza ukugeleza kwegazi.
Ukuqinisa imisipha yenhliziyo ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi.
Ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo.
Angina pectoris ku-anamnesis.
Ukwanda kokuzivocavoca komzimba.
Umuthi we-cardioactive uqukethe i-Q10, i-folic acid kanye neqembu lamavithamini B. Ngenxa yale nkimbinkimbi yezinto ezisebenzayo, umuthi ulungisa isigqi senhliziyo, uqinisa izindonga zemithambo yegazi nemisipha yenhliziyo, usheshise ukuhamba kwegazi, ugculisa inhliziyo ngamavithamini namaminerali adingekayo.
I-Coenzyme Q10 - I-Vitamin yenhliziyo eyinhloko. Kuyo yonke le minyaka, ukukhiqizwa kwayo emzimbeni womuntu kuyehla. Kancane kancane, lokhu kuholela ekukhathaleni okusheshayo, ukuncipha kokusebenza kokuzivikela komzimba, ukushesha kwenqubo yokuguga yomzimba kanye nokuwohloka kokusebenza kwe-CVS (uhlelo lwezinhliziyo). Ungabuyisela izinga le-coenzyme uma ngabe kunenqwaba yenkomo namantongomane noma uthathe izidakamizwa ngokuqukethwe kwayo okuphezulu.
I-Folic Acid (B9)nbsp, uvithamini ongakhethwanga emzimbeni. I-Folic acid iyadingeka ekukhuleni kwamangqamuzana amasha, ukuvimbela isimila nezinkinga ezihlobene nobudala zomsebenzi wobuchopho, ukuqina kwe-cholesterol nokwenza ngcono ukuhamba kwegazi. I-B9 isiza nge-atherossteosis, umdlavuza webele ne-colon, isifo sezinsini, i-osteoparosis kanye ne-migraine.
Vitamin B6 (Pyridoxine) isiza umzimba ukuthi ubhekane nengcindezi, uqinise uhlelo lwezinzwa, ukhuthaze ukumuncwa okungcono kwama-acid acid, kuthuthukisa ukusebenza kwenhliziyo.
Vitamin B12 (ICyanocobalamin) Ibhekele ukuqina kwegazi nokuvela kwamangqamuzana amasha, inomphumela omuhle kumetabolism nezitho zokugaya ukudla, isibindi kanye nohlelo lwezinzwa, kugqugquzela ukutholwa kwamaprotheni, amafutha kanye ne-carbohydrate, kuvimbela ukukhula kwe-anemia, futhi kunciphise ukucasuka ngokweqile. Ezinganeni, kukhulisa isifiso sokudla futhi kuqinisa amasosha omzimba.
Isikhathi sokuvuselelwa ngemuva kokuqothuka kwe-myocardial.
Ukuphazamiseka okuhlobene nobudala komsebenzi wobuchopho.
Umthamo wesidakamizwa uncike esimweni sempilo nobudala isiguli. Ezimweni eziningi, i-Cardioactive ithathwa nge-1 capulethi kanye ngosuku noma ngokushesha nangemva kokudla. Kungcono ukuthatha umuthi ekuseni. Inkambo yokwelapha - inyanga engu-1.
Uma kunesidingo, ezinsukwini eziyi-10 ngemuva kokuphela kwenkambo yokwelashwa, isifundo singaphindwa.
Ngaphambi kokuthatha umuthi ngaphambi kokuphinda isifundo, kufanele uthintane nodokotela njalo.
Ukufana kwezidakamizwa, isigaba sentengo
Isengezo sebhayoloji asinazo iziphikiso. Ezinye izidakamizwa ezifanayo nge-CardioActive zingahlukaniswa. Lokhu kufaka phakathi:
"IPanangin enamavithamini e-B."
"I-Complex ye-magnesium ne-B vitamini" ukwenziwa kwe-Doppelherz.
I-CardioActive ithandwa kakhulu phakathi kwabathengi. Umuthi ungathengwa cishe kunoma iyiphi ikhemisi ezweni. Intengo yayo ingama-ruble angama-230 futhi ingahlukahluka ngokuya ngesifunda. Ngaphandle kokuthi umuthi usatshalaliswa ngaphandle kwemithi kadokotela, kufanele kuboniswane nodokotela oyi-cardiologist ngaphambi kokuwusebenzisa.
Ukwanda kwenani lamavithamini ngesikhathi sokukhulelwa kungathinta kabi i-fetus, ngakho-ke i-Cardioactive ayinqunyelwe ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukuthatha umuthi ngesikhathi uncelisa ibanga kungaholela ekwehleni kwesilinganiso sobisi lwebele, ngakho-ke iCardioactive ayinconywa ukuba ithathwe ngesikhathi sokuqunjelwa.
Umuthi kumele ugcinwe lapho ufakwa khona okokuqala, endaweni eyomile, uvikeleke elangeni eliqondile futhi ungafinyeleleki ezinganeni.
Ukushisa kwesitoreji akufanele kudlule i-25 C.
I-Cardioactive igcinwa iminyaka emi-2 ngemuva kosuku lokukhiqiza oluboniswe kuphakheji.
Izindleko ezijwayelekile zesidakamizwa eRussia Federation zingama-ruble angama-450.
Intengo ephakathi ye-Cardioactive e-Ukraine ingama-200 hhucnias.
Umuthi onomphumela ofanayo ungabekwa udokotela kuphela.
Ihlakazwa emakhemisi ngaphandle kwencwadi kadokotela.
Kuvunyelwe ukwamukela izingane kusuka eminyakeni eyi-14.
Ukuhlaziywa kokubuyekezwa kwesidakamizwa seCardioactive esitholakala kwi-Intanethi kuveze imiphumela elandelayo: Iningi lemibono iyakhanya, ababhali bayo bakhuluma ngokuphepha nokusebenza kahle kwemithi, kanye neminye imiphumela evela ekusetshenzisweni kwayo, engashiwongo emiyalweni (ukwenza ngcono ukulala, i-cholesterol ejwayelekile, amandla andisayo).
Umbono wesazi sezinhliziyo maqondana nalesi sidakamizwa nawo muhle: uyavunywa futhi uvame ukubekelwa kwezokwelapha zombili ekwelashweni okuyinkimbinkimbi nanjengethuluzi lezokwelapha elizimele.
UMarina, oneminyaka engama-31 ubudala"Nginalo ifa elibi ngasohlangothini lukamama, inhliziyo yami ihlala igungqa, kwesinye isikhathi ibuhlungu kakhulu, kwesinye isikhathi isigqi. Ngisehhovisi likadokotela, konke kuhamba kahle, kepha ngathola lokhu kubi. Ngiqeda ukuphuza izifundo. Impela, ngiyabona ukuthuthuka, inhliziyo yami ayikhathazeki, sengizolile. iphupho laba ngcono kakhulu. Ngokuvamile, impilo yami yathuthuka, ngizwa amandla amaningi. "
Svetlana"Ngayalwa ngenhliziyo ekhemisi. Ngine-cholesterol ephezulu futhi kwesinye isikhathi ingcindezi iyakhuphuka, uma ngihamba ngokushesha, iba buhlungu enhliziyweni yami. Ngiphuza inkambo yesibili yalezi zinhlwayiqo manje. Kuhlolwe ngokwami ​​- umphumela uza cishe isonto elizayo. Inhliziyo isebenza njengokuthi Ngikhohliwe ngokuphelele ngewashi. Futhi kufana nokuthi iya ngokuqina. Ngiwuthanda kakhulu umphumela, umuthi ungiphathe kahle. Akunamiphumela emibi. "
I-BAA Cardioactive iyithuluzi lesimanje lokugcina impilo yenhliziyo. Umuthi awunawo amakhemikhali ayingozi, ubekezelelwa kahle ngumzimba futhi uhlanganiswe nazo zonke izidakamizwa ezaziwayo zokwelapha izifo zenhliziyo nezemithambo.
Ngenxa yokuhlanganiswa kwamavithamini adingekayo enhliziyweni nokuqukethwe okuphezulu kwe-coenzyme Q10, umuthi usebenza ngobumnene kodwa ngempumelelo emzimbeni. I-Cardioactive isebenza ngokwejwayelekile ukusebenza kwe-CVS, iqinisa inhliziyo nemithambo yegazi, futhi ivimbele ukuthuthukiswa kwezifo zenhliziyo nobuchopho kubantu abangaphezu kweminyaka engama-40.
Intengo ephakathi yalo muthi eRussia ama-ruble angama-450, aphakeme kakhulu kwisengezo esisebenza ngokuphila. Kepha inani elikhulu lokubuyekezwa okuhle libonisa ukuthandwa kwalo muthi kanye nokusebenza kwawo okuphezulu.
Ukungezelelwa kokudla kwe-Cardioactive kungathengwa kunoma iyiphi ikhemisi ngaphandle kokuyalelwa ngudokotela, kepha kungcono ukungazindisi futhi uthintane nodokotela ngokuthatha lo muthi.